လူမီနီယမ်အလွိုင်း Solenoid Valve
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လူမီနီယမ်အလွိုင်း Solenoid Valve(24 များအတွက်စုစုပေါင်း လူမီနီယမ်အလွိုင်း Solenoid Valve ထုတ်ကုန်များ)
လူမီနီယမ်အလွိုင်း Solenoid Valve - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ လူမီနီယမ်အလွိုင်း Solenoid Valve ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား လူမီနီယမ်အလွိုင်း Solenoid Valve / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် လူမီနီယမ်အလွိုင်း Solenoid Valve များထဲမှ Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. ။
tag ကို: သွေးခုန်နှုန်း Solenoid Valve , DMF-Z-62S Electromagnetic Pulse Valve , နစ်မြုပ် Pulse Solenoid Valve
အလုပ်လုပ်ဖိအား: 0.8MPa မှ 0.3 အပူချိန်: 10 ~ 60 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆ: အလတ်စားသုံးပြီး: စင်ကြယ်သောလေကြောင်းရန် အလုပ်လုပ်ဗို့: AC အ: 110 / 240V, DC: 24V ဘဝမြှေး: 1 သန်းကြိမ် အမည်ခံအချင်း :? 25? 40? 50? 62? 76? 40 ဆက်သွယ်ထားသောချည်: G1...
tag ကို: ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings , ဘိလပ်မြေဖုန်ဖယ်ရှားရေး Pulse Valve , စက်မှု Bag အမျိုးအစား Pulse Valve
Wholesale လူမီနီယမ်အလွိုင်း Solenoid Valve from China, Need to find cheap လူမီနီယမ်အလွိုင်း Solenoid Valve as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on လူမီနီယမ်အလွိုင်း Solenoid Valve produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our လူမီနီယမ်အလွိုင်း Solenoid Valve, We'll reply you in fastest.